I-Ulefone isungula iimodeli ezimbini ezisesikrinini ukuze ibambe imarike | Iindaba zeGajethi
Inkampani yaseTshayina Ulefone Khange afune ukuphoswa kukuchongwa kwi-Mobile World Congress ebibanjelwe e-Barcelona kule veki. Iimpawu ezingaphezulu nangaphezulu ezivela kwimvelaphi yaseAsia ezinje ngeXiami, Vivo okanye iHuawei zivula imakethi enamandla eSpain, inkampani iyazi ukuba lixesha lokuba ibonise iUlefone T2 Pro kunye neqabane layo iUlefone X.
Iifowuni ezimbini eziphefumlelwe ngokucacileyo sesinye isixhobo esikhuphisanayo, kodwa ezibonelela uyilo oluhle kwaye iscreen Umbono ogcweleyo ihamba ne "notch" edumileyo ye-iPhone X kunye neeprosesa zeMediaTek ukugcina kancinci.
Siza kujonga ezona nkcukacha zibalulekileyo zezi zixhobo, kunye nokwahluka kwazo kunye nezizathu ezinokusenza sigqibe ukuthenga enye yazo yakuba igqityiwe iNdibano yeHlabathi yeFowuni, eshiyeke izitya ezimbalwa ukuba zisinike. thina.
1 I-Ulefone T2 Pro, irhamncwa lokwenyani
2 Ulefone X, kwabo bangadingi kangako
I-Ulefone T2 Pro, irhamncwa lokwenyani
Le fowuni ivula iprosesa apho iMediaTek ifuna ukwenza indawo ethe kratya iphikisana nokuba ngowuphi owona mzuzu mibi weQualcomm kunye noluhlu lwayo lweSpapdragon. Ke, esi siginali iya kuba yeyokuqala ukufaka i-Helio P60, iprosesa ekumgangatho ophakathi efuna ukukrwela isiphelo esiphezulu, kuba ngoku iba sesona sitishi sinamandla esibekwa zizandla zeUlefone. Uyilo lwangaphambili ngumxube phakathi kwento i-Samsung Galaxy S9 (ezantsi) kunye nokunikezelwa kwe-iPhone X (phezulu), bakwazile ukuthatha okona kulungileyo kwindlu nganye ukufaka isikrini esingekho ngaphantsi kweesentimitha ezi-6,7 ngesisombululo I-FullHD +, elingana ne-216 × 1080, enomlinganiso wezinto ezinje ngemfashini ngoku, 18: 9. ç
Uthetha ukuthini ukukhwela eyona MediaTek ilungileyo? Ewe, siza kufumana ii-Cortex A73 cores eziza kubonelela ngamandla e-2GHz, zihamba kunye nezinye ii-Cortex A53 cores ezinokubonelela ngesinye isantya seewotshi ze-2GHz. Ukuthatha ithuba ngale processor, ibinokwenzeka njani ukuba kungenjalo, sine-RAM kuyo yonke indawo, ukubaxwa kuyinyani, kwaye loo nto kukuba i-Ulefone T2 Pro ayizukunyusa nto kwaye ayikho enye into engaphantsi Imemori ye-8 GB ye-RAM, Kunye nokugcinwa kwayo ngaphakathi, I-128GB ke awunasizathu sokukhalaza.
Icandelo lokufota likwafuna ukuya kuthi ga ngoku, kuba le sinayo ikhamera emibini eneenzwa ezimbini, enye ye-21 MP kunye ne-13 ye-MP esingazi ukuba ngumenzi wayo. Iiselfie azizukuba yingxaki enkulu kuwe Ikhamera yangaphambili ye-16 MP, Amanani ngokuchanekileyo yile Ulefone T2 Pro ishiyekileyo, nangona kuya kuba yimfuneko ukubona ekugqibeleni indlela eziphatha ngayo kwimisebenzi yemihla ngemihla. Yonke into ayisiyiyo le ihleli apha, kwinqanaba leendaba sinokuninzi kakhulu, ukuqala inkqubo yokwamkelwa kobuso ebizwa Ubuso (ewe, njengegama elifanayo nenkqubo ye-Apple) kunye nesenzi sokubonisa umnwe esidityanisiweyo phantsi kombonisoKubonakala ngathi liphupha elimanzi labathandi beminxeba ephezulu ... kulungile?
Isikrini: 6,7 intshi kwi-FullHD + isisombululo se-2160 x 1080 nge-18: 9 ratio
Ukugcina: 128 GB
Ikhamera esemva: 21 MP + 13 MP isivamvo ezibini
Ikhamera yangaphambili: Inzwa ye-16 MP
Ibhetri: 5000 mah
Abanye: Umfundi weFingerprint odityaniswe kwiscreen, ukubonwa kobuso.
Ukuhambisa irhamncwa elinjalo amakhwenkwe I-Ulefone khange isikwe kwisoftware, bebefuna ukuba ne-Android 8.1 Oreo, Kubonakala ngathi iimveliso ezininzi (ngakumbi nangakumbi) ziyaxhuma kwi-bandwagon yezona nguqulelo zamva nje ze-Android, sicinga ukuba yimfuneko xa kufikwa ekungeniseni izinto ezininzi ezintsha. Ewe kunjalo, asikayazi ukusebenza ngokukuko kwalo mfundi mtsha wokufunda ngomnwe kunye nokubonwa kobuso okuhlangeneyo.
Ulefone X, kwabo bangadingi kangako
Umphambili nomva wayo ziphantse zafana ne-iPhone X, apha i-Ulefone ayifuni kusika nwele. Esi sigxina sibekwe phakathi kuluhlu oluphakathi, inkcazo ayisiyonto iphambeneyo, kodwa ayikude kakhulu, nangona iscreen yeyona nto ijongeka imbi kakhulu xa ujonga indlela abayikhwele ngayo inotshi kunye nokukhanya kwayo.
Isikrini: 1440 x 720 HD + isisombululo se-5,85 intshi ngo-18: 9 umlinganiso wezinto
Ukugcinwa kwangaphakathi: 64 GB iyandiswa
Ikhamera esemva: I-16 MP kunye ne-5 MP ezimbini zenzwa
Ikhamera yangaphambili: Inzwa enye ye-13 MP
OS: I-Android 8.1 Oreo
Abanye: Umfundi weminwe.
Ulefone khange abelane ngomhla wokumiselwa ngokusesikweni Akukho xabiso lincinci, ngaphandle kwamathandabuzo ukuthengwa kuya kuthintelwa, kodwa siya kunika ingqalelo ekwandiseni ulwazi lolwaziso olusemthethweni. I-Ulefone iqinisekile ukubonelela ngamaxabiso okhuphiswano ayenza ukuba ibe yenye indlela enomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Ulefone isungula iimodeli ezimbini ezikwisikrini ukuze zithande intengiso
NDINAMANDLA ANGEKHO ULEFONE, KWAYE KUNOKWENZEKA UKUBA XA NDITSHINTSHA, YIBA YINKQUBO YENKQUBO YO-T2… UMATSHINI OPHELELEYO, OZA KUXABISA OWESITHATHU KWI-GALAXY S9